RASMI: Abaalmarinta Tababarihii Ugu Fiicnaa Premier League Bishii September Oo La Bixiyay & Jurgen Klopp Oo Lagaga Guuleystay - Gool24.Net
RASMI: Abaalmarinta Tababarihii Ugu Fiicnaa Premier League Bishii September Oo La Bixiyay & Jurgen Klopp Oo Lagaga Guuleystay
Maamulka horyaalka Premier League ayaa ku dhawaaqay guuleystaha abaalmarinta tababarihii ugu fiicnaa horyaalkaas bishii September ee laga soo gudbay iyadoo loo caleemo saaray macalinka kooxda Everton ee Carlo Ancelotti.
Everton ayaa hoggaanka Premier League ee hadda haysa kaddib markii ay soo guuleysatay dhammaan kulamadii ay ciyaartay, marka laga yimaado guusha Carlo waxa sidoo kale abaalmarinta xiddigii bisha hantay gool dhaliyaha Toffees ee Dominic Calvert-Lewin.
Ancelotti ayaa ku guuleystay abaalmarintan maadaama oo uu qaab 100% ah ugu bilaabay Everton horyaalka iyagoo kasoo wada guuleystay Tottenham, West Bromwich Albion iyo Crystal Palace oo ay bishaas kahor tageen.
“Anigu dhab ahaan waan faraxsanahay, waa guul weyn oo la gaadho, waxaan la wadaagayaa kooxdayda iyo ciyaartoydayda” ayuu yidhi Ancelotti oo dareenkiisa cabirray kaddib guushan.
Abaalmarintan ayaa ah midii shanaad ee nooceeda ah ee uu Carlo kusoo guuleystay kaddib markii uu markiisii koowaad April 2011 lasoo qaaday Chelsea isaga oo afarta kale Blues lasoo hantay.
Ancelotii ayaa abaalmarintan ku garaacay tababarayaal uu ugu magac weyn yahay Jurgen Klopp oo ay magaalada Liverpool wada joogaan waxaana ay kala yihiin labada tababare ee kale ee abaalmarintan kula tartamayay Brendan Rodgers oo Leicester City ah iyo Dean Smith oo Aston Villa ah.